Global Voices teny Malagasy · 30 Jolay 2018
Oktobra 2021 42 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 30 Jolay 2018
Efa nampahafantarina antsika ny tetikasan'i Ghaida'a Al Absi 'Fanohanana ireo Vehivavy Mpikatroka amin'ny Teknikan'ny Media' izay nampiofana ireo vehivavy mpikatroka ao Yemen ary niaraha-niasa tamin'ny hetsika Hand In Hand . Iray amin'ireo nahazo vatsy fanohanana avy amin'ny Rising Voices ry zareo. Faly izahay fa vita soaman-tsara ny atrikasa fihodinana voalohany.
Angletera30 Jolay 2018
Amerika Latina30 Jolay 2018
Nisy tolotra vaovao roa nifantoka tamin'ny bilaogy Peroviana tamin'ny taon-dasa: ny voalohany dia ny Perublog.net, izay nanomboka niasa tamin'ny volana Janoary 2005 . Ary tamin'ny volana May, nipoitra ihany koa ny Perublogs.com, armoara iray izay ho lasa mpamatsy tolotra isan-karazany ho an'ny tontolon'ny bilaogy Peroviana